एउटा फेसबुक म्यासेजमा उनले मलाई सोधेकी थिइन्, “तिमी नेपाल कहिले आउने ?” हामी निकै मिल्ने साथी थियौँ । ‘तिम्रो मेरो सम्बन्धको अर्थ खोज्न मन लाग्यो’ भन्ने गीतकै जस्तो हाम्रो पनि त्यही हालत थियो । म अस्ट्रेलिया आउनुअघि मलाई बल दिन उनले भनेकी थिइन्, “तिमी दुई वर्षमा त आइहाल्छौ नि ! किन डराएको ? म पनि पढ्छु, दुई वर्ष त मेरो पनि बिहे हुँदैन ।” त्यसको अर्थ के थियो ? मैले केही कुरा बुझें भन्ने लाग्यो ।
मैले फेसबुकबाटै जवाफ दिएको थिएँः अर्को तीन वर्षपछि ।
बीचबीचमा अरु पनि धेरै कुरा भए । फोन र इन्टरनेटमा प्रायः सधैँको जस्तो ‘लुरी’ र ‘कालु’ भनाभन् पनि ।
अनि अर्को दिन त फेसबुकमै निम्तो आयो, बिहे भोजको । उनकै बिहेको ।
साथैमा लेखिएको थियो, ‘तिमी मेरो बेस्ट भन्दा पनि माथिको साथी हौ अनि रहिरहनेछौ, तिमीजस्तो साथी त शायदै कहिले भेट्छु होला ।’
मैले केही बुझेको भनेको त होइन रै’छ । मैले केही प्रश्न गर्न त पाउनै प¥यो नि होइन ? किन कि म त त्यस्तो बेस्ट भन्दा पनि माथिको साथी थिएँ । एउटा प्रश्न गरेँ । जवाफ चाहिँ आएन ।
अरे बाबा, जवाफ नदिने भए ठिकै छ तर फेसबुकबाट हटाइहाल्न त पर्दैन नि !
यो कथा मेरा साथी प्रकाशलाई थाहा छ । उनले पनि भनिहाले, “मेरो आफ्नो कथाकै झल्को आयो ।”
“अचम्मै छ है, कसैले त नयाँ कुरा भन्नु नि हौ”, उनी भन्दै थिए ।
“यस्तो इतिहासमा केटीले नै सधैँ जितेका छन्, किनकि उनीहरुसँग भन्ने एउटा बलियो अनि अचुक कुरा हुन्छ । त्यही बेस्ट फ्रेण्डको कथा ।”
सिड्नीको मिक्स एफएममा एउटा कार्यक्रम आउँथ्यो । राती नौ बजे ‘लब सङ्ग्स डेडिकेशन्’ । (मिक्स एफएम अब किस्स् एफएम भएको छ) । ट्रेन स्टेशनमा एमएक्स भन्ने फ्रि पत्रिका पाइन्छ, जसमा प्रेम सन्देश दिने स्तम्भ पनि हुन्छ । इहार्मोनी भन्ने अर्को अन्लाइन नेटवर्क छ, जसमा आफू सुहाउँदो साथीहरुको खोजी गर्न मिल्छ । मैले पनि लहलहैमा प्रोफाइल बनाएँ, अनि आफ्नो नाम राखेँ– बिल।
लब सङ्ग्स डेडिकेशनमा अहिलेसम्म एउटा नेपालीको सन्देश मैले सुनेको छैन । कोही साह्रै खुशी भएको सन्देश दिन्छन्, कोही बिछोडको पीडा पोख्छन् । त्यो रिचार्ड भन्नेले साह्रै राम्रो गरी बोल्थ्यो । मलाई कोही नेपालीले सन्देश दिएको चाहिँ सुन्ने बडो धोको थियो । मैले सन्देश दिनु पर्ने कोही छैनन्, नत्र म थपनी सन्देश पठाउँथे होला । रेडियोमा फोन गरेर ‘कसलाई गीत अर्पण गर्ने’ भन्दा मैले के भन्नु ? त्यस्तै एमएक्समा पनि नेपालीले दिएको सन्देश पाएको छैन मैले । सधैँ पढ्न नपाएर पनि होला । यसमा पनि नेपालीले लेखेको सन्देश हेर्न खुब मन छ । ई–हर्मोनीमा पनि यत्तिका प्रोफाइलहरुमा एउटा नेपाली नाम छैन मैले देखेको । कुनै–कुनै नेपालीजस्तो लागेर प्रोफाइल चेक ग¥यो, कि त इन्डियन या त बाङ्गलादेशी हुन्छन् ।
इन्डियन केटाहरुको नेपाली गर्लफ्रेन्ड हुनसक्छन् भने मेरो पनि इन्डियन गर्लफ्रेन्ड हुन सक्छन् नि भन्दै अरु अरु प्रोफाइल हेर्छु । यसरी जोडी खोज्ने कुरामा मलाई विश्वास त लाग्दैन तर पनि रमाइलो हुँदो रै’छ । सबैको आफ्नै तरिका हुन्छ, आफूलाई प्रस्तुत गर्ने । लेखाइ कस्तो राम्रो हुन्छ धेरैको । ट्रेनमा पढ्न रमाइलो हुन्छ । ‘बिरालो मन पराउँछु’ भन्ने केटीको प्रोफाइल देख्नेबित्तिकै मैले तो प्रोफाइल बन्द गर्छु र अर्को हेर्छु । सपिङ्ग खुब मन पर्छ भन्नेहरुले पनि डराउन दिन्छन् । भेटेको दिनदेखि शपिङ्ग गर्न लिएर हिड्नु प¥यो भने भाइबहिनीको पढाइको लागि के पैसा पठाउने भन्ने डर लाग्छ । यो पनि बन्द ।
फेसबुक बाहेकका यत्तिका धेरै नेटवर्क छन्, नेपालीको नाम निशान भेट्दिनँ ।
बरु मैले नचिताएको ठाउँमा भने एक पटक भेटेको छु । पत्रिकाको एडल्ट सेक्शनमा– अन्य राष्ट्रियताको छेउमा नेपाली पनि लेखिएको । त्यो देखेर म खुशी भइनँ । त्यो भन्दा पनि दुःख त्यहाँ पुगेका साथीहरुको बयानबाट लाग्यो । त्यहाँको साहुले ‘न्यु साउथ वेल्सकी एउटी मात्र नेपाली हो भनेर बढी पैसा लिँदो रै’छ ।’
एक दिन बिहान काममा जान ट्याक्सी चढेँ । बसेर सिट बेल्ट बाँध्न भ्याएको थिइन, ड्राइभरले ‘नेपाली हो ?’ भनेर सोध्यो । म खुशी भएर हो, कसरी चिनेको भनेर सोधेँ ।
मेरा नेपाली केटाहरु ग्राहक छन्, मेरा धेरै केटी साथीहरु छन् भनेर मसँग एकाबिहानै आफ्नो विज्ञापन ग¥यो ।
फोन नम्बर भने दिएन । उसलाई फेरि अर्को दिन भेट्ने आश लाग्यो होला ।
मेरा मन्नु भन्ने साथीले चर्चित ‘हु मुभ्ड माइ चीज’ भन्ने किताबको कुरा निकाल्छन्, अनि भन्छन्, “हामी अझै पनि आफूलाई बदल्न सकिरहेका छैनौँ । परिवर्तनसँग डराउँछौँ । काम, घर, कलेजमै धेरैको जिन्दगी बितिरहेको छ । सबैले घर–घरमै मःम बनाउँछन्, त्यत्ति हो फरक ।”
“सबै त त्यस्ता हुन्नन्’, मैले भन्छु । मैले धेरैको भनेको छु । सबै भन्या होइन”, उनको जवाफ आउँछ । अनि मैले सोच्छु, “मैले पनि त डराएर ई–हार्मोनीमा नाम बिल राखेँ ।”
मेरो वरिपरिका कथाहरु